न्यू योर्कका बुद्ध चेम्जोङको प्रेम र वासनाको भुंग्रोमा दु:ख सेकाइरहेका नेपालीका कथा "रुपकी रानी रूपा" | literature न्यू योर्कका बुद्ध चेम्जोङको प्रेम र वासनाको भुंग्रोमा दु:ख सेकाइरहेका नेपालीका कथा "रुपकी रानी रूपा" | literature
We have 1348 guests and 198 members online
Content View Hits : 35808545
Written by Dr. Gobindraj Bhattarai
Saturday, 17 November 2012 06:11
कीर्तिपुर- यो प्रेमको आग्रह हो । बुद्ध चेम्जोङको "रुपकी रानी रूपा" भित्रका सबै कथा प्रेम विषयक रहेछन्, प्रेमभन्दा पहिले कामुकता लुकेर हिडेको छ सधैं । कामुकताको मार्गमा हिँड्दा प्रेम पनि प्रदुषित हुने रहेछ । सृष्टिको आरम्भदेखि नै यी सधैँ मुश्किल थियो । मानिस सधैँ ती बीचको भ्रान्तिमा फँसेको छ । यहाँ त्यसैको दृष्टान्त छ ।
The cover of author Buddha Chemjong Limbu's "Rupaki Rani Rupa",acollection of his short-story collection book. Photo courtesy: Buddha Chemjong
यस्ता कथा मेरोमा प्रेमले नै आइपुगे । हङकङबाट टंक सम्बाहाम्फेले चिनाए, अमेरिकाबाट अमर नेम्बाङले । म हार्न सक्तिनँ । जो नेपाली साहित्यकोलागि समर्पित भएर लागि परेका छन्, तिनलाई हार्न कसैले सक्तैन । लोक सिंगक भाइले पुस्तक भइसकेको टाइलिपि ल्याएर मलाई कीर्तिपुरमा बुझाएपछि हेँरे - कुलपति श्री बैरागी काँइलाको र डा. गोविन्दराज भट्टराईको रंगीन तस्बीर समेत्को डमी-किताब आएको छ । यो प्रेम र श्रद्दा दुवै हो । अनि धनकुटा राजारानीका बुद्धलाई मैले आफ्नै सामू देख्न थाले- कथा लेखिरहेको ।
बुद्ध चेम्जोङका ताजा कथाहरुको सङग्रह "रुपकी रानी रूपा" सुकर्मटोलमै ढल्केर पढेँ । यी युवा सुलभ कथाले निर्मित सङग्रह लाग्यो । अब नेपाली साहित्यको अर्को हाँगो - डायास्पोरिक विश्व, कति जोडतोडले आउँदैछ । मलाई यो कृति देख्दा हर्ष र आश्चर्य लाग्यो । नेपाली सिर्जनाका उद्गम स्थलहरु कति व्यापक भए, कति विविधतापूर्ण भएका भन्ने लाग्छ । नेपाली पाठकले "रुपकी रानी रूपा" जस्तो एउटा कृतिमा देख्नेछ, एक जना श्रष्टा आफ्ना नेपाली समाजका कतिपय चित्र हृदयमै बोकेर कतार पुगेका छन्, हङकङ छिरेका छन् फेरि मलेसिया हुदैँ अमेरिकाको भिन्न संस्कृति गृहमा त्यहाँको जीवन शैलीमा ठोकिएर भत्किन पुगेका छन् ।
Author Buddha Chamjong Limbu. Photo: eEyecam.com
बारम्बार मलाई यस्तो विश्व व्यापिताले छोइरहन्छ । हिजो एस के परदेशीले लखनऊबाट फूलमती (कथा सङग्रह) पठाए । अस्ति अनि बेलायतका रक्ष राई र मिजास तेम्बेले नव चेतना सङग्रह पठाए, अर्कोपल्ट बेलायतका दुतबहादुर गर्बुजा पुन मगरले युकेका कविता पठाए - प्रत्येकपल्ट म यही अनुभव गर्दैछु । यही नवीनताबारे बोल्दैछु, यही विश्व संस्कृतिको सालखोल चित्र लिएर आउने आफ्नो वाङमय देखेर प्रसन्नता प्रकट गर्दैछु ।
बुद्धले अनेक देशका नेपाली अनुभव सङगालेर यी कथा रचेका छन् । नेपालकै परिवेशका केही छन् । अरुले कतार, दुबईदेखि अमेरिकासम्म पुर्याउँछन् । एउटा रचना भने यात्रा संस्मरण शैलीमा छ अरु केही कथाहरु निबन्ध र रिपोर्टको दोसाँधमा छन् तर जुन कथा भनेर लेखे, ती साँच्ची सरल र मनोहारी लाग्छन् । यौवनका प्रथम प्रेमका कुतकुतिका, अनुभूतिका तज्जन्य गल्ती र त्रुटिले उत्पन्न पश्चाताप र पीडाका, अझ कुनै छन् आत्मध्वंशका ।
बुद्धका प्राय: सबै कथामा पुरुष सक्रिय भूमिकामा छन् । शीर्ष कथा रुपकी रानी रूपा विमलको रूपा प्रतिको प्रेमोन्माद र विषयाशक्तिले तानेको यो सुन्दर, कथा स्वप्न र भ्रान्तिको शैलीमा छ । प्राय: सबै कथा यौन विषयक कल्पनाका सन्देह, चिन्ता र भ्रान्तिका छन् । यी कथाको मूल संदेश - अतृप्त यौन र खुलापनले निम्त्याएको वासनात्मक अतृप्ति हो । बाबु आमाको अनियन्त्रित यौनिक चरित्रले अथवा अवैध चालाले नानीहरुको मनोविज्ञानमा आघात परेका कथा छन् । त्यागका, प्रतिक्षाका, धोका र बन्चनाका घरप्रतिको जिम्मेदारी र परदेशको स्वच्छन्दता बिचका तनावमा पात्रहरु फसेका, बिग्रेका, ग्लानी र पश्चातापका कथाहरु छन् । नरनारी शिक्षित् भएर टाढा टाढा पुग्दा झन् स्वच्छन्द र उन्मुक्त भएका छन् ।
दीपकले सवितालाई भ्रम राखिरहेको कथा, फिलिपिनी भासमा डुबेको विमल, एकातिर कम्जोर पति अर्कातिर यौन पिपासुले फसाएकी रीता - यस कथामा पनि उही स्वप्नकै विधि अपनाइएको छ । अरब र हृदयघात जस्ता कथा बारम्बार सुनिएको यथार्थिक घटना पनि छ ।
अरब भूमिका कथा कामका, आर्जनका, घरको जिम्मेदारीले थिचिएका युवाका छन् भने अमेरिकी कथा चाही राजुबाबु श्रेष्ठको मरुभूमि मृत्युमेलामा झैँ - अमेरिका र बेलायत पसेका नेपाली अति स्वच्छन्द, अति अनियन्त्रित भई पथ भ्रष्ट भएका, शारीरिक मोहले, तृष्णाले, भोग लालसाले- डढेर समाप्त भएका छन् । नरनारी दुवै त्यस्तै छन् ।
बेबीसिटर पाश्चात्य विश्वमा नेपालीले भोगेको भुक्तमानको कथा - यसमा अनेक प्रकारका आकाङक्षा र लालसा जोडिएका छन् । अमेरिकी संस्कृतिमा नेपालीको प्रवेशले भोग्नु परेको कति यथार्थ राजवले पनि कथामा दर्साएका छन् - क्यापिटल हिल जस्तामा, यहाँ बुद्धले पनि अरु थपेका छन् ।
नेपाली नरनारीहरु स्वतन्त्र विश्वतिर साहसले आँटले निस्केका छन् । यो प्रशंसनीय पक्ष हो तर अधिकांश ती अझै अत्यन्तै असुरक्षित् छन् - यहाँका अधिकांश कथाले त्यही बताएका छन् । बुद्धका कथाका पात्र औसत नेपाली हुन् - श्रमिक, कामदार, शरणार्थी, जीवनको खोजिमा नवीन विश्वतिर हाम्फालेका । यी सबै पहिलो पुस्ताका डायास्पोरिक अनागरिक हुन्, यी तिनकै अनुभूति हुन् । बिस्तारै स्थिति भिन्न होला तर आज दु:खले भ्रान्तिले अशिक्षाले, देशको राजनीतिक अस्थिरताले ज्यादा विचलित छन् । बुद्धले वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने बाध्यतालाई देशको अबस्थालाई चित्रण गरेका छन् । यस्ता नवीन अनुभूतिको लागि यी कथा पठनीय छन् ।
बुद्धका कतिपय कथामा शिल्पलाई माझ्ने, परिस्कार गर्ने ठाउँ छ तर कथा जुन जन्मिए, त्यही ठुलो उपलब्धी हो । त्यसमाथि यी अत्यन्तै सरल वर्णनात्मकले बुनिएका, केही निबन्धात्मक संस्मरण जस्ता वर्णन पनि छन् । प्रत्येक नवागन्तुकमा शिल्पगत चातुर्य, मिहीन शिल्प र पूर्णता बिस्तारै भरिने तत्व हो । एउटा फूल भित्र पराग भरिन कति समय लाग्छ, म चाहन्छु बुद्धमा यो छिटै भरियोस् । बुद्धले प्रेम र वासनाको भुङग्रोमा दु:ख सेकाइरहेका नेपालीका कथा लेखेका छन् । नयाँ पुस्ताले औधी मन पराउने छन् ।
अनेकौं नेपाली डायास्पोरा छुदैं यतिखेर अमेरिकी अनुभूति लेख्ने बुद्धप्रति, म अनेक प्रेम र अनन्न आशिर्वाद प्रकट गर्दछु ।
-Dr. Gobindraj Bhattarai in Kritipur, Kathmandu
नोट: समीक्षक डा. गोविन्दराज भट्टराई नेपालका बरिस्ठ समालोचक हुन्।
-न्यू योर्कका कथाकार बुद्ध चेम्जोङ लिम्बुको कथा संग्रह "रुपकी रानी रुपा" को नेपालमा बिमोचन